Ruqsadaha waxbarasho ee AutoCAD - Geofumadas
Ogast, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Waan ognahay in ardaygu waxbarasho xirfad jaamacadeed uusan lahayn qalab badan oo ah $ 2,000 taas waxay ka kooban tahay ruqsad ganacsi AutoCAD. Waxaan sidoo kale la soconaa in isbeddelka guud uu ahaa sharci darro.
Meelaha qaarkood, burcad-badeednimada ayaa wali loo arkaa khiyaano mudan in la qadariyo. Laakiin tartiib tartiib ayey ugu dhacaysay sababta, in ardayda laftoodu, markay qalin jabiyaan, aysan doonaynin inuu qof xado xuquuqdooda xuquuq shaqo ku lumisay waqti, dadaal iyo lacag. Qotada dheer, burcad-badeednimadu waa caado xumo marka la fiiriyo xirfadda ay tahay inaan sheeganno.
Hagaag waxaan ku maalgalinay $ 600 kumbuyuutar, anaga oo aan ka fikirin ikhtiyaarka ah in aan ka xado shaybaarka ama asxaabta fasalka ah. Sidoo kale, la qabsashada maalgelinta barnaamijka softiweerku waa inay qayb ka noqotaa noqoshada dad mas'uul ah oo ku hamiya inay guuleystaan ​​xirfadlayaal ahaan.
Sababtaas awgeed, liisamada waxbarasho ayaa soo baxa, kuwaas oo ah noocyo buuxa laakiin qiimo aad u hooseeya iyo waqti xaddidan. Guud ahaan waxay yihiin muddo 61 bilood ah, taas oo ah qiyaas qiyaas ah oo xirfaddu socon karto iyada oo aan la maaweelin carruurta ama shaqooyinka ka baxsan qoraalka.
Dukaamada iibiya rukhsadyadan waxaa oggolaaday AutoDesk, waxay u baahan tahay marka la diiwaangelinayo si loo caddeeyo inuu yahay arday Jaamacad ama Kulliyad iyo inuu baranayo ugu yaraan hal maado oo ka kooban 3 qaybood oo qiimo leh. Si tan loo sameeyo, si fudud u iskaan kaarka iyo foomka diiwaangelinta maamulka xilliga iibsiga.
Iibsiga waxaa lagu sameyn karaa kaarka deynta ama Paypal maraakiibtu maaha mid aad qaali u ah sababtoo ah waa barnaamij.
Waxay ku kala duwan yihiin nooca barnaamijka, guud ahaan qiyaastii $ 148, oo ku saabsan 5-sano AutoCAD ama liisanka Revit. Waxa kale oo jira arday weligood ah, waxay noqon karaan kuwo lagu cabbiri karo liisanka ganacsiga, sida dhici kara mar haddii ardaygu qalinjabiyo, meeleeyo shirkaddiisa oo uu doorbido inuu ka fogaado ganaax ka hor xisaabinta software-ka ee hadda aad u badan.
Ficil ahaan, liisamada waxbarashadu waa beddel la aqbali karo, oo ay u baahan karaan labada ardayba, macallimiinta iyo xarumaha tababarka. Waxa kale oo jira rukhsado sidan oo kale ah oo loogu talagalay hay'adaha aan macaash doonka ahayn.
Mid ka mid ah shirkadahan waa Studica, oo ka jirta 1985 iyo in laga reebo AutoDesk waxay sidoo kale bixisaa ruqsadaha waxbarashada ee SolidWorks, CadSoft iyo Sketchup Pro.
Autodesk Barnaamijka Tacliinta
Post Previous" Hore Qiyaasta Isbarbardhiga 60 Wadarta Goobta
Post Next Injineernimada, GIS iyo Maareynta Deegaanka: Koorsooyinka soo dhowaadaNext »
4 Jawaabo "Ruqsadaha Waxbarshada ee AutoCAD"
Sidee loo ogaan karaa inta jeer ee aan ka tagay inaan isticmaalo liisanka bilaashka ah?
Qiiqa isagu wuxuu leeyahay:
Fasalka teknoolajiyadu waa inuu u dhowyahay muwaadinka, ma aha oo kaliya dhinaca madaniga, laakiin sidoo kale waa mid xirfad leh. Horumarinta sida kuwa gvSIG waxay raacaan khadkan, taas oo aynaan iloobin inay qayb ka tahay ganacsiga. Anigu ma awoodi karo inaan ka shaqeeyo SME iyada oo ArcGIS iyo AutoCAD, oo aan ka yareeynin liisanka. Waxaan u baahanahay caymis bilaash ah. Qiimaha badeecadaha sida ArcGIS (ma aha in la sheego kordhinta) iyo AutoCAD waa xad-dhaaf ah Maxay sababta aysan u baranin shirkadaha kale ee Intel?
Hagaag, waxaa jira siyaabo kale oo furan
ARGILICO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaad sheegtay! 500 euros waxay u qalantaa kombiyuutar. Qiimaha GIS waa mid aan la aqbalin